How to exchange PDF neShoko. Tips uye mazano
Zvino unogona kuwana guru chitsama mapepa anopiwa mu PDF format. Asi zvokuita kana uchida kuva chinyorwa simba iro rinowanikwa zvinhu zvakadaro, uye kuti rokutsvaka yayo kwenguva refu uye havana kuda? Panzira, kubatsira dambudziko iri Snap. Kana usingazive kuti exchange PDF Shoko, unogona kubatsira zvinhu zvedu.
Zvino kune zvirongwa zvakawanda zvinogona exchange youduku ichi pachena rwezuva. Ndizvo ruzhinji mafomu aya vakabudirira anoshanda magwaro iwayo chete, izvo havana kuisa mavara echivande. Asi sei kutendeutsa PDF Shoko, kana faira yepakutanga kunodzivirirwa? Kana makavhara, unofanira kuwana workarounds. Chokutanga, funga nyore nyaya.
Tinoda chirongwa FineReader hwaiva ichangopfuura Bhaibheri. More chaizvo, tinoda Screenshot Reader utility, inova chikamu usashandisa chigadzirwa. Zvairehwa zviri kuti anoona rugwaro kubva screenshot. Zvichitaurwa zviri nyore, uchishandisa zvake chinovhara kubatwa. Simbisa siyana pamwe rugwaro muchida, achizviendesa bhatani nokuda kuzivikanwa, uye ipapo kumirira.
Kwapera nguva iri Clipboard mashoko rwaunoda rwunoratidzwa. The chete dambudziko zvakadaro vachava chokuita peji imwe neimwe. Kana gwaro iri diki, chaiwo chinetso uchaita kuriunza. Uye kana kwete? Zvino zviri nani kutsvaka faira pamwe chete kugutsikana kuti kudzivirirwa. Chokwadi, unogona kuwana nzira yokunzvenga pasiwedhi, uye ipapo exchange PDF kuShoko, asi zviri zvakaoma kuti beginners.
How to exchange usina kuzvidzivirira faira?
Saka, une gwaro nyore kuti haisi pasiwedhi kudzivirirwa. How kutendeutsa munhu PDF faira muShoko? We FineReader Chirongwa zvinogona kubatsira zvakare. In ayo mamiriro pane imwe pfungwa huru kuti yaibva anogona kuziva PDF faira, uye goho kuti bani rugwaro rinogona kuverengwa chero hofisi Suite.
Kana usingade kushandisa yoga chirongwa, unogona kushandisa kuminamato mabasa paIndaneti kuti vari kurarama zvakanaka basa ravo. Unogona kungoti Upload faira wako Server, uye goho kuti mureza chinyorwa gwaro, akazaruka uye Edit usingavaki nyore. Kazhinji, kutendeuka haatori nguva yakawanda uye inoenderana kunobva faira saizi, iro "yakamedza" chirongwa. Change Shoko PDF kunyange nyore: hakufaniri iiswe pamusoro muchina wako chero okuwedzera Ezvemutauro. Chokwadi, nzira iyi ndiyo yakakodzera chete kune vanoshandisa vane kuramba kuwana pemambure.
Developers vanofanira kushandisa chete yepamusoro muenzaniso kuzivikanwa algorithms, kana goho, unogona kuwana mamwe gibberish. Ari pfupiso anofanira kutaurwa, chii chaizvo chichakurukurwa anosikwa ose matafura, mifananidzo uye mazita, riri kunyanya kukosha kubudiswa magwaro yesayenzi. Ona kuti zvakanaka nezvechisarudzo kusarudza zvakanaka kwakavakirwa ruzivo rwavo, vakati vagura chirongwa chakadai vaviri mapepa kwete zvikuru.
In shoko, exchange PDF Shoko harisi zvakaoma kudaro!
Vhoriyamu faira gadziriro haina kuzivikanwa (USB nokupenya tikachirega). Zvokuita, sei rokudzorera?
Sei kupisa mufananidzo kuti USB Flash Drive
FlashTool, kukanganisa: decoding, achitaura, nzira uye vanorumbidza
Ko kweprostate gland nevanhu
IP68 - pafoni simba bhatiri. Magadzirirwo uye nhoroondo
Pillows akazara Buckwheat pamateko
Kana bhizimisi iri anokosha zvinobatsira?
"Taxi Social" muMoscow - mubatsiri chaicho vanhu vakaremara uye mhuri ine vana vakawanda
All nyeredzi Arthur Darvill
Chii chinonzi Zuva St George kuti munhau?
Kusapindirana The vakaroorana dzakasiyana
Filmography Sokurov - musangano vhidhiyo uye unyanzvi kusanduka chokwadi
Beam Tichitevedzera - kubva mugadziri, unogona kuwana chero bhodhi
Cake "New": resipi